Isithsaba esenziwe ngombala seFiberglass Ilaphu abavelisi kunye nabaxhasi - China Polyurethane Camera Fiberglass Ilaphu Factory
Silicon Camera Fibreglass Ilaphu
Ilaphu leCarbon Fibre
PTFE Fibreglass Ilaphu
Lyu Camera Fiberglass Ilaphu
Aluminium ngefoyile ye-fiberglass Ilaphu
Indwangu yeFiliclass Camera
Abicah Fibreglass Ingubo
Ingubo emnyama yeFiberglass
0.4mm Silicon Camera Fibreglass ingubo
Ubushushu obuphezulu Ingubo yeFiberglass
Ilaphu leBlue Carbon Fibre
I-4 × 4 iTwill Carbon Fibre
1k Ingubo yeCarbon Fibre
Ingubo yeglasi yePtfe
Indwangu yeTeflon fiberglass
Ptfe Camera Glass ingubo
Acrylic Camera Fibreglass
Ingubo ye-Acrylic Fiberglass
Indwangu yePolyester yePhepha
Indwangu yePolyester yePhepha yiphepha le-fiberglass eligutyungelwe yi-Polyurethane, kunye nezinto ezidityanisiweyo ezinemisebenzi emininzi, uyilo lwe-DU camera ilaphu le-fiberglass liyakwazi ukuziqhelanisa neendawo ezahlukileyo.Izinto ezinokuqina ukomelela, ubungqongqo, ukuthamba, umbala oqaqambileyo, ukuxhathisa okungaphezulu kokunxiba, kubanda, ioyile, amanzi, ukuguga kunye nemozulu Ikwanomsebenzi wentsholongwane, kwaye inokusetyenziselwa ukungqinisisa ukungunda, ukufudumeza ubushushu kunye ne-anti-ultraviolet.
Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu
I-Pu Camera fiberglass yengubo yengubo ilaphu elingenamlilo elenziwe ngokutyabeka ilangatye elidodobeleyo lomphezulu phezu kwelaphu le-fiberglass ngobuchwephesha bokubopha ubuchwepheshe. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
Pu Camera fiberglass ingubo
Pu Camera fiberglass ingubo ilaphu engangenwa eyenziwe nokwaleka nelangatye nekudodobalisa lyu phezu kobuso fiberglass ilaphu kunye iteknoloji ukurhola ekuqaleni. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
Umhlwa we-Fibreglass yengubo
I-Anti Corrosion Fibreglass yengubo lilaphu elingenamlilo elenziwe ngokutyabeka ilangatye elidodobalyo kwi-polyurethane kumphezulu welaphu le-fiberglass ngobuchwephesha bokubopha ubuchwepheshe. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
Ubushushu waphatha Bulky Fibreglass ingubo
Ubushushu aphathwe Bulky Fibreglass ingubo lilaphu engangenwa eyenziwe ukutyabeka nelangatye nekudodobalisa lyu phezu kobuso ngelaphu fiberglass kunye technology ekuqaleni ukutyabeka. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
3m Ifayibha yengubo
I-3m Fibre yengubo lilaphu elingenamlilo elenziwe ngokutyabeka ilangatye elidodobalisayo kwi-polyurethane kumphezulu welaphu le-fiberglass elinobuchwephesha bokubopha. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
Ingubo eqinileyo yeFiberglass
Ingubo ye-Pu eyomeleleyo ye-fiberglass yakhiwe kwilaphu lesiseko se-fiberglass kwaye yamiliselwa okanye yatyabeka icala elinye okanye omabini amacala ngerabha eyenziwe ngokukodwa yesilicone. Ngenxa ye-silicone yerabha yokungena emzimbeni, ayonyusi nje kuphela amandla, i-thermal insulation, i-fireproof, iipropathi zokwambathisa, kodwa ikwanakho ukumelana ne-ozone, ukuguga kweoksijini, ukuguga okukhanyayo, ukuguga kwemozulu, ukumelana neoyile kunye nezinye iipropathi.
Pu Camera Polyester Ilaphu
Ilaphu leFiber fiberglass yengubo ilaphu kukusebenza okuphezulu kwengubo ye-fiberglass egutyungelwe ngophando oluphezulu lwe-Polyurethane polymer .Lo malaphu anokugqitywa anokumelana neqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-180-yokugqabhuka okufutshane. Ukuchasana kwe-abrasion kunye nokuxhathisa okuhle kwioyile kunye nokunyibilikisa.Amacala amabini / amacala aphindwe kabini ahlanganiswe amalaphu e-fiberglass anemibala emininzi kunye nobubanzi ziyafumaneka.
Ingubo yeFiber Fiberglass
fiberglass wawutyabeka DB ilaphu ilaphu engangenwa eyenziwe nokwaleka nelangatye nekudodobalisa lyu phezu kobuso fiberglass ngelaphu kunye ubuchwepheshe ekuqaleni ukutyabeka. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kunye neempawu zokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu, ukungangeni mlilo, ukungangeni manzi kunye netywina elingangeni moya.
Iselfowuni / Wechat: +86 18622623855
Intshayelelo yengubo yeCarbon fiber kunye neempawu
Iimveliso ezintsha zelaphu le-Teflon fiberglass
Tianjin Cheng Yang Iimveliso ezishushu ze Silico ...
Ingubo yeFiberglass, Acrylic Camera Fibreglass, Indwangu yeFiliclass Camera, Ingubo yeAlglised fiberglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Ingubo ye-Acrylic Fiberglass,